yasekwa ngo-2003, elili shishini elinamashishini eligxile kwicandelo lokutya okuphezulu, kunye neminyaka engaphezu kwe-10 yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye namava okuthengisa atyebileyo kwicandelo lokutya okukutya, kuxhaswa luphando lobuchwephesha kunye nophuhliso olutsha amandla, ukwandiswa kwamandla emveliso kunye neenzuzo zesikali, ukufezekisa ukudityaniswa kwamashishini kunye nezolimo indlela yokudityaniswa kwamashishini.
Umthamo wefektri entsha yefektri eyi-4.0 esemgangathweni, eza kuthi isebenze kunyaka olandelayo, inokufikelela kwi-500 yezigidi ze-yuan. (74 yezigidi zeedola)
Inkampani isebenza ngemodeli enkulu yokuthengisa imveliso, umsebenzi wokukhuthaza umsebenzi omkhulu, ulwazi oluphezulu lwentengiso, iimveliso zithengiswa kwimixokelelwane ephezulu yevenkile ezinkulu, iivenkile ze-KA, iivenkile ezikhethekileyo zalapha ekhaya, imibutho yolawulo lwamakhonkco ezizwe ngezizwe kunye neevenkile zentengiso kunye nezinye iindlela zokuthengisa , Iifomathi zentengiso ezili-100 eziphezulu zaseTshayina zinentsebenziswano.
Umbono weNkampani: Yiba yinkampani ye-FMCG ekumgangatho wehlabathi.
Umsebenzi wenkampani ojolise kuyo umsebenzi: yenza wonke umntu onwabele uvuyo lwe popumbona!
Umbono weBrand: ukuba luphawu lokuqala lodidi lwe popcorn e China.
Iinqobo ezisemgangathweni: ukwakha amaphupha kunye, kugxila kulwakhiwo, ukuthembeka nentsebenziswano, ekhokelela ekugqweseni.
Iimpawu zentloko zePopcorn: INDIAM
Iziqinisekiso ezininzi zeGLOBALGAP, ISO 22000.
Isabelo sentengiso ephezulu: (intsebenziswano yejelo)
Uphuhliso: Umzi-mveliso omtsha, ubeko olutsha, ukuba ngowokuqala e-China, ukukhanyisa umhlaba.
Ingcali: Iqela lentengiso lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe elakhiwe ngetalente yohlobo lweleli.
Gxila: konke kwi-popcorn into enye, ukufezekisa eyona nto iphambili kufanelekile!
Uxinzelelo: Ukwenza ngokomnqweno wentengiso kunye nokugxila ekwenzeni umgangatho ophucukileyo kunye neepopcorn ezingabizi kakhulu.
I-Popcorn, njengommeli oqhelekileyo wokutya okunyangayo, inokunyusa ngokukhawuleza inqanaba lokufihlakala kwe-dopamine kwingqondo ngexesha elifutshane, ibenze abantu bazive bonwabile, kwaye ngenxa yoko kufana nencasa ecekeceke yepopcorn, kufuneka ukuba ube nokutya okutyayo. Ukuzonwabisa, ukubukela iimovie kunye nokufumana iinkqubo zeTV. Ukongeza, iipopcorn ngaphandle kweqokobhe kunye ne-cores kulula ukuzitya kwaye zilungele ukucoceka kwendalo; Iipopcorn zinokuvula iindlela ezahlukeneyo zokutya, ukonwabele ukonwaba kunye nokuziva.
1. Izinto ezikrwada ezikhethiweyo: I-Indiam Popcorn yenziwa ngombona we-mushroom ongenisiwe, isiraphu esemgangathweni ye-maltose kunye ne-caramel ye-premium eqinisekisiweyo yokuqinisekisa incasa yendalo kunye nencasa.
2. Ukuphishekela okunempilo: Sisebenzisa ioyile yendalo yeoyile yesundu ekhutshwe kumafutha asezantsi, ioyile yemifuno enekhalori ephantsi ukuqinisekisa impilo yeemveliso zethu.
3. Yendalo kwaye imnandi: Izinto ezisetyenzisiweyo ezisempilweni, iibhola ezijikelezileyo nezigcweleyo, incasa ekrwada, umbala oqaqambileyo, akukho cores zilukhuni ngaphandle kweentsipho.
4. Itekhnoloji eyahlukileyo: I-popcorn yaseIndiya ihambele phambili kwimveliso yemveliso ezenzekelayo, isebenzisa ukukhanya kwetekhnoloji yala maxesha, ulwandiso luchanekile, ibhola ijikeleze kwaye igcwele, ihlaba ngokugqibeleleyo.
Imizuzu eyi-18 yokubhaka incasa ye-crispier: Emva kwamakhulu eemvavanyo, inkqubo yokubhaka yemizuzu eyi-18 iqinisekisa ukuba isondlo semveliso ngokwayo kunye nencasa yemveliso iyaphuculwa.
INKQUBO YOKUHAMBA KWENKQUBO YEMVELISO
6. Imizuzu eyi-18 yokubhaka kubushushu obuphantsi
7.Ukupakisha kunye nokutywina
8. Ukupholisa okuhamba ngomoya
9. Ukwenza iikhowudi
Eyokuqala kwinkqubo yokubhaka eneqondo lobushushu eliphantsi ukuze incasa ebhetele.
Inkangeleko iyabonakala kakhulu kwaye iyaphatheka.
U-Brand-Brand + uQobo lweFektri + yeNtengiso + yeeNkonzo zobuNgcali
Ukujonge phambili ekwakheni intsebenziswano yokuphumelela kwishishini kunye nawe!
INDIAM popcorn, Iiparcorn zeCaramel, Amaqhashu, I-China ikwelwe ukuba yenziwe Igumbi lokufundela,